“Madaxweyne Farmaajo safarkiisa Dhuusamarreeb waa gacmo daalis iyo gar-naclaysi, haddii uusan Baarlamaanka siraynin” – Kalfadhi
“Madaxweyne Farmaajo safarkiisa Dhuusamarreeb waa gacmo daalis iyo gar-naclaysi, haddii uusan Baarlamaanka siraynin”
August 16, 2020 Hassan Istiila
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur, oo ka hadlayay khudbadii Madaxweyne Farmaajo uu ka jeediyay Baarlamaanka, ayaa sheegay in Madaxweyne Farmaajo mowqifkiisa uu sii caddeeyey, safarkiisa Dhuusamarreeb na uu yahay gacmo daalis iyo gar-naclaysi, haddii uusan Golaha Shacabka siraynin, sidii uu horay xukuumadda iyo raysalwasaaraha ugu siray in awoodda iyo talada iyagu leeyihiin.
Halkan ka akhriso qoraalka uu soo dhigay barihiisa bulshada.
“Madaxweyne Farmaajo mowqifkiisa waa sii caddeeyey, safarkiisa Dhuusamarreeb na waa gacmo daalis iyo gar-naclaysi, haddii uusan Golaha Shacabka siraynin, sidii uu horay xukuumadda iyo raysalwasaaraha ugu siray in awoodda iyo talada iyagu leeyihiin.
Madaxweyne Farmaajo nin dhowraya heshiis lala galay maaha, sababtoo markii ay Dhuusamarreeb 2 soo dhammaatay wuxuu riday Raysalwasaarihiisii, nin Dastuur iyo sharci tixgeliyana maaha, sababtoo ah wuxuu oggolaaday sharci darridii lagu riday xukuumadda, isagoo magacaabay raysalwsaare xil sii hayn ah oo aan Dastuurka meelna kaga dhignayn.
Waxaase muuqata in madaxwyne Farmaajo uusan weli waano qaadan, kuna kedsoon yahay, dulqaadka dadka oo uu doqonnimo iyo tabar la’aan mooday iyo qar iska tuurnimo in badan u soo shaqeysay. Ma jirto meelo badan uu ku sii dhuunto, maalmihiisuna way tirsan yihiin”.
Guddoomiyaha Aqalka Sare oo Madaxweyne Farmaajo ku eedeeyay in uu jabiyay Dastuurka